Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Wepụ nje COVID-19 site na iji Ionizer ikuku ọhụrụ
Dị ka nke Mee 2021, Healthtù Ahụ Ike wa anabatala ụmụ irighiri ikuku ikuku dị ka usoro mbufe maka COVID-19. Ọrịa dị elu nke ụdị delta pụtakwara na ntọala ime ụlọ nwere ikuku ikuku na-adịghị mma na-etinye nnukwu ihe egwu na ị nweta COVID-19 n'ihi na nje nje na-efe efe nwere ike ịdịgide na ikuku ruo ogologo oge.
Na mbu site na nyocha nrụpụta ikuku nke ikuku nke ebipụtara na akụkọ nyocha OSF (OSF Research Article 2021) na mbido 2021, egosipụtara na osisi Zero2.5 na ionizer sitere n'okike na-ewepụ 95% nke ikuku ikuku na nkeji iri abụọ na ise (na-enweghị enweghị). ionizer) n'ime nkeji 25 n'ime ụlọ 7 m20 juputara na irighiri aerosol 3 kwa cm4,000. Nke a dakọtara na inwe ACH ("mgbanwe ikuku kwa elekere") dị ka 3 na CADR ("ọnụego nnyefe ikuku dị ọcha") nke 12 ft141 kwa nkeji.
Agbanyeghị, ka mba bidoro ịhụ mweghachi nke ọnụọgụ ikpe COVID-19 sitere na ụdị delta dị iche iche, Zero2.5 emewokwa ngwa ngwa iji nweta nkwado nnwere onwe nke mmetụta nchebe nke ikuku ikuku ikuku ikuku na-enye kpọmkwem megide COVID-19.
Dị ka nke Nọvemba 2021, ndị otu nọ na Zero2.5 nwere obi ụtọ ịkọrọ na nsonaazụ nnwale nnwere onwe maka nchedo nje ga-emesịa ka ogologo usoro nkwado siri ike site na Texcell. Texcell bụ ụlọ ọrụ nyocha nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ hiwere na 1987 bụ ọkachamara na nnwale nje, mkpochapụ nje na biosafety.
Texcell mere ọmụmụ ihe gbasara nje virus, nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ iji chọpụta ịdị irè nke usoro n'ime ka nje ghara ịrụ ọrụ site n'ịtụle ọnụọgụ nje na mbụ na ọnụọgụ nje fọdụrụ mgbe usoro mgbochi nje gasịrị.
Nnwale ahụ metụtara Zero2.5's Natural Fiber Coco Coir Air Ionizer CF4000 wee gosi na 99.998% nke nje Sars-Cov-2 arụghị ọrụ n'ime awa 3 n'ime igbe dị lita 57 - na-anọchi anya mbelata log nke 4.77. Dịka ọmụmaatụ, mbelata ndekọ nke 1 dabara na mbelata okpukpu iri, ebe mbelata log nke 10 bụ mbelata 2 okpukpu. A na-ahụta mbelata log nke 100 na karịa ka ọ dị irè site n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ n'ibelata ọnụọgụ nje. Nnwale njikwa gosipụtara na na enweghị ionizer ikuku nke Zero4, 2.5% nke nje ahụ ka dị irè mgbe awa 99.999 gachara.
Dị ka akụkụ nke atụmatụ mmeghe nke Singapore gaa na nke ọhụrụ, ikuku ionizers sitere n'okike anyị - ugbu a nwere nkwado sayensị onwe ya n'ịkwalite nje COVID-19 - nwere ike rụọ ọrụ nchebe dị mkpa na mpaghara nwere oke okporo ụzọ mmadụ.
Ibunye ihe nchacha ikuku ezughị oke n'ihi na ọrịa na-ebutekarị site na kọntaktị ozugbo ozugbo. Enwere windo nke adịghị ike n'etiti oge ikuku aerosols nke nje na-emepụta site na onye na-efe efe na oge ebe a na-enyocha ikuku site na nchacha ikuku azụmahịa. Ihe ize ndụ nke mgbasa ozi maịl ikpeazụ a na-arị elu nke ukwuu n'ebe ndị mmadụ juru.
Zero2.5's Natural Fiber Air Ionizer na-ebelata ihe egwu a site na ibelata mkpokọta nje na ozugbo nso isi iyi. Ọnụnọ dị elu nke ikuku ikuku na-adịghị mma (NAI) nke ionizers sitere n'okike nke dị nso na isi iyi nje na-enye ebe nchekwa 360-ogo, dị ka ikuku nzacha afụ nke na-ebelata ibu nje iji chebe ndị ọrụ nọ n'ime ya. Ọzọkwa, dị ka Texcell kwadoro, ikike nke Zero2.5 Ioniser ime ka ọrụ nje rụọ ọrụ na-enyere aka ibelata ma ọ bụ ibelata ihe ize ndụ ọ bụla nwere ike ibute ọrịa.
Ijikwa ihe ize ndụ nnyefe nke kilomita ikpeazụ na mpaghara okporo ụzọ dị elu ga-abụ isi, ka akụ na ụba na-amụta ibi na COVID-19. Enwere ike itinye ihe nchebe ozugbo megide nje dị ndụ nke Zero2.5 sitere na ionizers sitere n'okike na mpaghara ndị a nwere nnukwu ihe ize ndụ iji belata oge mpio nke ibute ọrịa site n'ime ka nje ahụ dị nso na isi mmalite ya.